ओली एकातिर एकातिर, खनाल नेपाल अर्कैतिर ! गौतम कतातिर ? - Nepali News Nepal
जुलाई 18, 2020 जुलाई 18, 2020 Bishwa Ghatana0Comments Prachanda, केपी ओली, प्रचण्ड
३ साउन २०७७ काठमाडौँ : आ–आफ्ना अडानमा रहेका नेकपाका दुवै पक्ष सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा सहमतिबाटै निकास निकाल्ने गरी छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकका सहभागीहरु । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा
‘सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरौँ, सहमतिका आधारमा निकास निकालौं भन्ने भएको छ । छलफल जारी छ । सचिवालयमा अझै छलफल गरेर पार्टी एकता रक्षा र सुदृढ गर्ने, जनादेशअनुसार काम गर्ने गरी अझै थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
सचिवालयको बैठकपछि आइतबार ३ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
नेकपा बैठक असार १८ यता ५ पटक स्थगित भएर आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ ।
ओली दाहाल दुवै पुगे सितल निवास
नेकपा सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति भवन शितल निवास पुगेका छन् ।
शनिबार बालुवाटारमा करिब ४ घन्टा बसेको सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै ओली र दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन् ।
दुई अध्यक्ष राष्ट्रपतिकहाँ गएको दाहालका सहयोगी जोखबहादुर महराले जानकारी दिए ।
पार्टी विवाद सुल्झाउने महत्वपूर्ण निर्णय हुँदा ओली र दाहाल एकैसाथ राष्ट्रपतिकहाँ जाने गरेको विगत छ ।
प्रचण्ड र ओलीले एकाएक माहोल बदलिदिए
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नाटकीय रुपमा नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेपछि नेकपाको विवाद नयाँ दिशातिर मोडिएको छ । सचिवालयको शनिबारको बैठकमा ओली र दाहालले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेपछि नेकपामा केही दिनयता जारी तनाव नयाँ दिशातिर मोडिएको हो ।
जबकी दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । र, ओलीले कुनै पनि पद नछाड्ने अडान लिएका थिए ।
तर, शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओली र दाहालको नयाँ प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकको सुरुमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘अहिले पार्टी संकटमा छ । पार्टी संकटमा हुँदा देश पनि संकटमा पर्छ । पार्टी एकता गर्नुपर्‍यो, त्यसको निम्ति सबैले कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुपर्‍यो । मेरो पनि कमजोरी भएका होलान् । अरुले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्‍यो । हामी मिलेर जानु पर्‍यो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका ती नेताले भने, ‘स्थायी कमिटीको बैठक ठीक ढंगले भएन । प्रचण्ड र मेरो बीचमा छलफल भएको छ । हामी सहमति नजिक पुगेका छौं । पहिला चैत्रसम्म गर्ने भनिएकै छ, सकेसम्म छिट्टै ल्याउँ । मंसिरमै गरौं । त्यसैबाट सबै समाधान गरौंला ।’
लगत्तै बोलेका दाहालले ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । ‘हामी मिलेका छौं । सहमति गर्नुपर्छ । मैले आलोपालोको कुरा छोडिदिए । महाधिवेशन छिटो गरौं भन्नेमा हामी मिलेका छौं,’ दाहालको भनाइ थियो ।
तर, वरिष्ठ नेता खनालले छिटो-छिटो गरेर महाधिवेशन नहुने बताए । खनालको भनाइ उद्धृत गर्दे ती नेताले भने ‘तत्काल महाधिवेशन गरेर जाउँ भन्ने कुराले पदको व्यवस्थापनले मात्र संघर्ष भएको रहेछ । कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर पद व्यवस्थापन गर्ने कि पार्टीमा महाधिवेशन गरेर पदको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । महाधिवेशन भनेको वैचारिक महाधिवेशन हुन्छ । छिटो-छिटो गरेर महाधिवेशन हुँदैन । तयारी नगरी महाधिवेशन जान सकिँदैन । बरु केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँ, त्यही छलफल गरौं ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले महाधिवेशन छिटो गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्श्वास नभएको बताए ।
‘दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिदिनु भयो । त्यसरी गर्न हुँदैन । व्यक्तिवादले समस्या खडा गरेको छ । आत्मालोचना गर्ने कुरा राम्रै भएको छ तर हृदयदेखि आत्मालोचना गर्नुपर्छ । किनकि मलाई शंका छ,’ नेपालको भनाइ उद्र्धत गर्दै ती सदस्यले भने ‘पहिला पनि आत्मालोचना गर्ने पछि त्यो टियर ग्यास हो भनिदिने पनि गरेको हो । महाधिवेशन छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अझै राम्ररी सोचौं, छलफल गरौं, स्थायी कमिटीमा पनि छलफल गरौं ।’
उपाध्यक्ष गौतमले अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सुधार चाहिएको बताए । ‘कार्यशैलीमा सुधार प्रधानमन्त्रीको हो । त्यो सुधारसहितको प्रस्ताव आएको भए राम्रो भन्न सकिन्थ्यो । तर त्यो आएन । व्यक्तिवादी कार्यशैली कायम भयो भने तपाईं १४ वर्ष जेल बसेको के अर्थ भयो र ? हैन छलछाम हुन्न भने ठीकै छ । तर लिखित प्रस्ताव चाहियो,’ गौतमले भनेका थिए ।
गौतमले अध्यक्षको व्यवस्थापनका लागिमात्रै महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगाउन सुझाव दिएका थिए । ‘अध्यक्षको व्यवस्थापनका लागि महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो भने किन महाधिवेशन गर्ने ? केन्द्रीय कमिटीबाट गर्न सकिन्छ,’ गौतमले भनेका थिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीमा छलछाम र खेलबाड बढी भएको बताए । उनले पार्टीमा छलफल भयो कि पार्टी एकतामा खतरा उत्पन्न भयो भनेर फुटलाई रोक्नु नै ठूलो उपलब्धि हुँदा अरु विषय थाँती रहने बताएका थिए । ‘राजनीतिमा दाउपेच सबै जान्नुपर्छ कृष्णले पनि हरेक षड्यन्त्र गरेर कौरवहरुलाई सिध्याए । चाणक्यले पनि षड्यन्त्र गरेर अर्को सत्ता स्थापित गरे । तर त्यो खेलबाड गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा म हुँ । कृष्ण त आफू सत्तामा बस्ने थिएनन्, सत्तासँग मात्र जोडिएका थिए । सत्य स्थापित गर्न उसले सक्थे । चाणक्य पनि आफू सत्तामा नबस्ने कुरा थियो,’ श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी त आफू सत्तामा बस्नेमा सहभागी हुँदै त्यस्तो खेलबाड गर्न लागेपछि सत्य स्थापित गर्नेतर्फ जाँदैनथ्यो । त्यसकारण हामीले कृष्ण र चाणक्यको भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । हाम्रो यहाँ खेलबाड बढी भयो । छलछाम बढी भयो । यसो गर्न हुँदैन ।’
वैचारिक र सैद्धान्तिक मुद्धालाई हल नगरी महाधिवेशन गर्न नहुने श्रेष्ठले बताएका थिए । अहिलेको समस्या समाधान केन्द्रीय कमिटीबाट गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।
सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनबाटै सबै समस्या हल गर्ने कुरा ठीक भएको बताए । ‘महाधिवेशन छिट्टै गर्ने प्रस्ताव आउँदा खुसी लाग्यो । महाधिवेशनबाट नै सबै समस्या हल गर्ने हो । यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा नल्याएको भएर विचलन भएको हो,’ पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै अर्का एक सदस्यले भने ।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले गुटहरु सक्रिय भएको कारण पार्टी फुटिसकेको बताएका थिए । उनले महाधिवेशन छिटो गर्ने भन्ने दुई अध्यक्षको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । ‘पार्टी एकता कायम गर्ने हो । छलफलबाटै समाधान खोज्नु पर्छ । छिट्टै महाधिवेशन गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव ठट्ठक छ,’ थापाले भनेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेलले पनि छिटै महाधिवेशन गर्ने दुई अध्यक्षको प्रस्ताव ठीक भएको बताए । ‘अध्यक्ष कमरेडको प्रस्ताव ठीक छ । हामी एकदम ठीक ठाउँमा आइयो,’ पौडेलले भने ।
सबै सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि बैठकको अन्त्यमा अध्यक्षद्वयलाई लिखित प्रस्ताव ल्याउन सचिवालयका अन्य सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए ।
संभव छ त ‘अर्ली’ महाधिवेशन ?
तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकता हुँदा तीन महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम सकेर दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति थियो । अन्तरिम विधानअनुसार नेकपाको महाधिवेशन ०७७ जेठभित्र भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एकताका पूरा काम सकिएका छैनन् ।
नेकपा विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैँले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संरचना तय गर्ने उल्लेख छ । माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ०७७ चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने नयाँ तालिका छ । तर, यो त्यति सहज भने छैन् ।
महाधिवेशन अगाडि नेकपाले एकताका बाँकी काम टुंग्याउनपर्ने, सदस्यता नवीकरण सक्नुपर्ने, तल्ला कमिटी र जनसंगठनको अधिवेशन सक्नुपर्ने, कार्यदिशाको बहस गर्नुपर्ने साथै नेतृत्वको संरचना र आकार टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यहीबीचमा कोरोना संक्रमण र चाडबाडसमेत भएकाले मंसिरको महाधिवेशन सहज भने नरहेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ छ।
← बनारस घटनामा देखिएका व्यक्ति नेपाली नभएको पुष्टि
रातारात उखेलेर फालिओ ठोरीस्थित सीता गुफा नजिकको सीमा स्तम्भ →
अध्यक्ष द्वयबीचकाे वार्ता सकियाे, शर्मा र पाैडेल पनि सहभागी
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नुभएको छैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ